Abaphathi beefayile abahlanu abalungileyo kwi-Android | I-Androidsis
Ezona mphathi zefayile zibalaseleyo ze-Android
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Tutorials
Uninzi lwabasebenzisi be-Android bathambekele ekugcineni iifayile ezininzi kwizixhobo zabo. Yiba yimifanekiso, umculo, ividiyo okanye amaxwebhu. Olukhetho luhle kakhulu kuba ngale ndlela sihlala sinazo ezi fayile. Kodwa, ngamanye amaxesha banokuba baninzi kakhulu. Kakhulu, ukuba asazi ukuba yintoni esinayo emnxebeni okanye kunzima kuthi ukuyifumana into esiyifunayo. Kule meko abaphathi befayile sisisombululo esinokubakho.
Siyabulela kwezi zicelo siya kuba nakho ukuququzelela yonke into ngendlela efanelekileyo. Ukongeza ekubeni luncedo olukhulu kwimeko apho sifuna iifayile kwaye asizifumani. Ke, Sishiya kunye nokhetho lwabaphathi beefayile ezilungileyo ze Android.
Ukukhethwa kwezi ntlobo zezicelo kuye kwanda kakhulu ekuhambeni kwexesha. Zininzi iinguqulelo ezintsha ezivelileyo. Ke ukukhetha ezona zibalaseleyo kunokuba yinkohliso. Kodwa, silucuthe uluhlu. Emva koko Sikushiya nabaphathi beefayile ezilungileyo ze-Android.
1 Ifayile yoMhloli
2 Umphathi we File ES Explorer File
4 Iyonke i-Commander
5 Inkqubo yokuKhangela yeAnTek
Yenye yezona ndlela zaziwayo zixhobo ze-Android esinokuzifumana. Ujongano lusekwe kuYilo lweZinto, ke ukongeza kuyilo olwenziweyo kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Isinika uthotho lwemisebenzi eyongezelelweyo eyenza ukuba ibe lukhetho olupheleleyo. Yintoni egqithisile, Ngomnye wabaphathi ababalaseleyo esinokuthi sibusebenzise kwithebhulethi. Ke ixhaphake kakhulu.
La Ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Kwakhona, akukho zinto zithengwayo okanye iintengiso ngaphakathi.
Umthuthukisi: UMauricio Togneri
Umphathi we File ES Explorer File
Ngomnye wabaphathi befayile abaziwa kakhulu ngabasebenzisi be-Android. Enye yezona zinto zilungileyo esinokuzifumana namhlanje. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ibonakala ngokusebenza kwayo, kuba eyona njongo yayo iphambili kukusinceda Iifayile zefowuni zihlelwe ngendlela echanekileyo ngawo onke amaxesha. Ukuze sikwazi ukubafumana nanini na xa sizifuna. Ukongeza, inemisebenzi emininzi eyongezelelweyo eyenza ukuba igcwaliswe ngakumbi.
Isivumela ukuba sikope, sincamathisele, sicime, sabelane okanye sithiye ngokutsha iifayile, phakathi kweminye imisebenzi emininzi. Inkqubo ye- Ukukhuphela umphathi we-Android simahla. Ngaphakathi akukho zinto zithengwayo nangona kukho iintengiso.
Le app ayifumanekanga evenkileni. 🙁
Yiya kugcina Uphendlo lwewebhu lukaGoogle
Esi sicelo yenye yezona zilula phakathi kolu luhlu. Inolula kakhulu kwaye ikhululekile ukusebenzisa uyilo. Ke ngawo onke amaxesha uyazi ukuba ungayifumana phi into oyifunayo. Sizahlulahlula iifayile ngokweendidi. Ke kulunge kakhulu ukukhangela into. Yintoni egqithisile, Singazilawula iifayile kwifowuni okanye nakwiGoogle Drayivu okanye kwiDropbox. Ngokubanzi ukhetho olusebenzayo kwaye kulula ukuyisebenzisa.
La Ukukhuphela umphathi wefayile ye-Android simahla. Ukongeza, akukho zinto zithengwayo okanye iintengiso ngaphakathi.
Umphathi wefayile ye-ASTRO
Umthuthukisi: Izinto ezisisiseko zika-Annie
Olu luguqulelo lwezixhobo ze-Android zeWindows Explorer. Ke umsebenzi awuzukukothusa kakhulu. Nangona kunjalo, kufuneka kuthiwe ukusetyenziswa kolu khetho kunzima kakhulu. Ke ithatha indawo yokuziqhelanisa. Kodwa, lukhetho olupheleleyo olunikezela ngemisebenzi eyongezelelweyo. Singazifumana iifayile kwisixhobo, kwinethiwekhi okanye kwilifu. Ukongeza, lukhetho olulungileyo ukuba ujonge umphathi wefayile yakho.
Ukukhuphela esi sicelo se-Android simahla. Nangona ngaphakathi sifumana iintengiso, ethi ngamanye amaxesha ibe nomsindo.
Umthuthukisi: C. IGhisler
Inkqubo yokuKhangela yeAnTek
Siluvale uluhlu ngolu khetho ukuba ibonakala ngokuba noyilo lobungcali. Le yinkalo yokuba bahlawule kakhulu. Into eyenza ukuba ukusetyenziswa kwayo kube lula kakhulu kwaye kube lula ukuyisebenzisa. Kwakhona isinika iindlela ezininzi ezahlukeneyo, zombini ezona zisisiseko kunye nezinye eziphambili. Ikwasinika nokufikelela kwiGoogle Drayivu okanye kwiDropbox.
La Ukukhuphela umphathi wefayile ye-Android simahla. Nangona kunjalo, kukho ukuthengwa kunye neentengiso ngaphakathi kosetyenziso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona mphathi zefayile zibalaseleyo ze-Android
Eyona bendiyithanda kakhulu ngu "Solid Explorer",
Ethe tye uneepaneli ezimbini zokuhamba, kwaye ungarhuqa iifayile ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye.
Isebenza njengomphathi weefayile zakho efini (Googledrive, Dropbox, Onedrive, Mega, njl) kwaye ikubonisa enye nenye njengediski, ukwazi ukukopa iifayile phakathi kwazo kunye nefowuni ngokulula.
Icala elisezantsi kukuba ayikhululekile, kodwa ukuba ujonga kancinci uyayifumana ipiratilla ...
I-Bulletin: usetyenziso lukaGoogle lokuba ufunde amabali endawo
Imifanekiso yokuqala yeMeizu 15 ibonisa ikhamera ezimbini kunye nescreen egobile
Jonga ukhetho lwethu kunye nezaphulelo ezilungileyo kwitekhnoloji